यस्तो छ नेपाली काँग्रेसको पहिचान |
यस्तो छ नेपाली काँग्रेसको पहिचान
प्रकाशित मिति :2017-05-13 17:47:13
१. काँग्रेसीहरुको बिपन्न वर्गका सामान्य मान्छेलाई मान्छे नगन्ने, हेप्ने जन्मजात चरित्र छ । उनिहरुमा ठालु हुने, आफुलाई मै हुँ भनी ठान्ने प्रबृत्ति छ । उनिहरु सामान्य मानिस भन्दा आफुलाई अलग्गै र बिशेष देखाउन चाहन्छन् । सामान्य मानिसहरुसंग घुलमिल हुन आफ्नो जातै जाला जस्तों गर्दछन् । यो उनिहरुको जन्मजात बर्गीय चरित्र हो । त्यसैले समान्य मानिसहरु काँग्रेसीहरुको नजिकै पर्न चाहदैनन् । सामान्य मानिसहरुमा काँग्रेस हुँ भन्नेहरुबाट एक किसिमको डर त्रास हुन्छ । त्यसैले यस्ता सामान्य मानिसहरु काँग्रेसीहरुबाट टाढै रहन चाहन्छन् ।
२. केहि अपबाद बाहेक बहुसंख्यक काँग्रेसीहरुमा ईमान्दारिता नामको चिज नै हुदैन । आफ्ना निकटस्थहरुसंग समेत ढाँटछल, छलकपट, तिकदम, जालझेल, प्रपन्च रच्ने उनिहरुको खास बिशेषता हो । काँग्रेसहरु आफन्तहरुसंग पनि कहिल्यै सोझो बोल्दैनन् । झुठा मुद्धा लगाएर बिरोधिलाई दुख दिने, फँसाउने, होच्याउने उनिहरुको खास प्रबृत्तिहो । झुटा मुद्धाको प्रसङ्ग चल्दा काँग्रेसको नाम संगसंगै जोडिएर आउँछ । त्यसैले सामान्य मानिस सकेसम्म काँग्रेसीहरुसंग तर्केर हिड्दछन् ।
३. काँग्रेस भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, घुस, कमिशन आदिप्रति अत्यन्त नरम दृष्टिकोण राख्दछ । उ जसरी र जे गरेर भएपनि सम्पत्ति थुपार्नु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । त्यसैले ठग्ने, लुट्न,े धोखा दिने, बेईमानी गर्ने, घुस, कमिशन खाने उस्को लागि सामान्य कुरा हुन्छन् ।
त्यसैले त भनिन्छ—गरिब काँग्रेस हुदैन, काँग्रेस गरिब हुदैन । कोही गरिब परिबन्दमा परेर वा कुरा नबुझी काँग्रेसी भयो भने पनि उस्लाई अरु काँग्रेसीले दासलाई झै हेयको दृष्टिले हेर्ने र व्यवहार गर्ने गर्दछन् । जसरी कमाएको भएतापनि एउटा काँग्रेसीले अर्को काँग्रेसीको खोजिनीति र नकारात्मक टिका टिप्पणी गर्दैन । कहाँ मौका पाएछ मात्र भनेर छोडि दिन्छ । बरु भ्रष्टाचार गर्नेलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने उल्टै सहयोग गर्न पुग्दछ ।
५. नेपाली काँग्रेस हामीले बिर्ता र जमिन्दारी प्रथा उन्मुलन गर्यौ भनेर गर्व गर्दछ । तर त्यो २०१६ सालमा बी.पी. को सरकारले गरेको काम हो । के अहिले शेरबहादुरको काँग्रेस बी.पी.को काँग्रेस जस्तो छ ? बी.पी. प्रजातान्त्रिक समाजबाद भन्दथे । तर देउवा काँग्रेस समाजबादको नाम सुन्दैमा मुण्टो बटार्छ । अहिलेको काँग्रेस राजनीतिक र सामाजिक रुपमा सहि अर्थमा यथास्थितिबादी र कतिपय सन्दर्भमा अझ प्रतिगामी पार्टी भई सकेको छ ।
उ कुनै पनि बिषयमा प्रगतिशील परिबर्तनको बिरोधि छ । कमैया र कम्लरी मुक्ति, हलियामुक्ति, सुकुम्बासी समस्याको समाधान, छुवाछुत प्रथाको उन्मुलन आदिको घोषणा गर्न नेकपा (एमाले) ले काँग्रेससंग कत्रो लडाई लड्नु पर्यो भन्ने कुरा दुनियालाई थाहा छ । उल्टै यी काम हामीले गरेका हौं भन्दा उसलाई रत्तिभर लज्जाबोध हुदैन ।
६. नेपाली काँग्रेस बिदेशीहरु प्रति दास मानसिकता भएको, बिदेशीहरुको दलाली गर्ने प्रबृत्ति भएको पार्टी हो ।
जनतालाई भन्दा बिदेशी शक्तिलाई रिझाएर सत्तामा जान खोज्ने र सत्तामा टिक्न खोज्ने पार्टी हो । यहि भएर त त्यस पार्टीका हालका सभापति ‘हामीलाई बिदेशीले पत्याउँछन्’ भन्दछन् । कोशी र गण्डक योजना, टनकपुर सन्धि उसको यही नीति अन्तर्गत भएका सम्झौता हुन् ।
कर्णाली र अरुण तेश्रो जलबिद्युत आयोजना भारतीय कम्पनिलाई दिने काम पनि उसले यही नीति अन्तर्गत गरेको हो ।
सत्तामा जानको लागि उसले बिदेशी शक्तिलाई जे मागे पनि दिने गर्दछ । बिगतमा पटक पटक उसले गरेका यस्ता कामबाट यस कुराको पुष्टि हुन्छ । यसरी नेपाली काँग्रेस राष्ट्रियताको सवालमा अत्यन्त कमजोर अडान भएको पार्टी हो । यसबाट उसको नेतृत्वमा नेपालको स्वाभिमान र सार्बभौमिकता सुरक्षित हुदैन भन्न हच्किनु पर्दैन ।
उसले यी कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, बिश्व बैंक, बिश्व व्यापार संगठन र एशियाली बिकास बैंकबाट सिकेको हो । त्यसैले देशका विपन्न र सीमान्तकृत वर्ग, पछाडि परेको क्षेत्र, भूमिहीन किसान, सुकुम्बासी, मजदुर, दलित आदिको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान गर्ने उसंग न कुनै दृष्टिकोण छ न चाहना नै । साच्चै भन्ने हो भने यदि नेपालमा नेकपा(एमाले) नउदाएको भए उसले अहिलेसम्म पनि ती वर्ग र तप्काका जनताको उत्थानको निमित्त अहिले भनिए जति कुरा भन्नसम्म पनि सक्ने थिएन ।
९. नेपाली काँग्रेसले जनताको सेवा गर्ने भन्ने कुरा जानेकै छैन । उ त समाजको ठालु हो, ठालुले त जनताबाट सेवा लिन्छ, आफुभन्दा तल्लो वर्गका निम्सरा जनताको सेवा गर्न उसलाई कहाँ सुहाउँछ ? त्यसैले चुनाव नआईन्जेल काँग्रेस गाउँ फर्कदैन, जनता कँहा जादैन, सहर बजार तिर, सदरमुकामतिर गफ हाँकेर, मोज मस्ती र एैयाश गरेर बस्छ ।